मैले उस्को किताब् अलि पर राखेर उस्लाई मेरो काख मा राखेर हल्का किस गरे – Ekathmandunepal
Homeब्लगमैले उस्को किताब् अलि पर राखेर उस्लाई मेरो काख मा राखेर हल्का किस गरे
१ पुष २०७४, शनिबार २०:१७ ekathmandu Nepal ब्लग 0
कुरा हाम्रै घरको हो । हाम्रो घर मा जहिले पनि कोहिन कोहि काम् गर्ने मान्छे राख्ने चलन छ। आजकल पनि खाना बनाउन कोहि न कोहि मान्छे घरमा हुन्छन । आमा बुबा डुबै जना क्याम्पस मा पढाउने गर्नु हुन्छ अनि क्यापसको लागि करिब २ घन्टा पहिला नै घर बाट निक्लनु पर्ने हुनाले प्राय सधै ८ बजे बाट नै म घर मा यक्लै हुने गर्छु। प्राय म साढे ८ बजे तिर उठ्छु अनि मन् लागे १० बजे तिर कलेज जान्छु।
मेरो कलेज घर नजिकै नै छ। कुरा १ दिन को हो हाम्रो घर मा खाना बनाउन बसेकि केटि जो सङग प्राय म त्यति बोल्दिन थिये, मेरो कोठा सफा गर्दै रहिछे। म चुप्चाप कोठा मा गयेर सोफा मा बशे। त्यो केटि ले नै मुख फोरेर भन्न थालि के हो किशोर तपाई को त तन्ना मा धेरै टाटा हरु छ नि? के को हो? भन्दै सोध्न थलि।।। मैले त्यति ध्यान् नै नदिई रयाल होला नि भनि दिये। उ अझ हास्दै भन्न थालि होइन कलेज का साथि हरुको ध्रेरै याद आयेर हो कि के हो येस्तो बिधि रयाल आयेको भनेर अरु सोध्न थलि। उमेर ले पनि त्यति धेरै नभयेकि त्यस्तै १५-१६ कि मान्छे लाई के थाहा होला नि भनेर मैले भने केटि देखेर नि कहि रयाल आउछ त?
रयाल त मिठो मिठो खाना देखे पछि पो आउछ त। उ फेरि हास्दै भन्न थालि त्यो त हो तर मुख मा आउने रयाल ले सिरानि मा टाटा हुनु पर्ने नि यहा त तन्ना मा टाटा बसेको छ त भन्न थालि। ल अब कुरा गर्न नसकिने भो भनेर म चुप् लागेर बसे। अनि जादै गर्दा मैले उस्लाई सोधे तेसो भये यो तन्ना को टाटा र मेरो कलेजको केटि साथि को के सम्बन्ध छ त? खोइ मैले कोहि केटि लाई घर लेराको देखेकि छस तैले? म अलि रिसायेको जस्तो गर्दै भने किनकि मैले केटि साथि त पर जावोस केटा साथि पनि घर मा लेराउने गरेको थिईन।
मेरो रिस देखेर हो कि किन हो कुन्नि उ खालि हासि मात्र अनि कोठा बाट निक्लिई। मैले त्यो दिन सम्म कुनै केटि सङग पनि योन सम्पर्क राखेको थिईन तर ब्लु फिल्म हेर्दै हस्त मैथुन भने गर्ने गरेको थिये। कैले काहि बेडमा नै सुति सुति छोल्ने गर्थे तेसैको टाटा बसेको रहेछ। मैले सोचे केटि लाई त सबै थाहा रहेछ कि जस्तो छ उमेर मात्रै सानो हो कि के हो भनेर सोच्दै थे उ फेरि मेरो नै कोठा मा आई। मैले सोधे अब के जासुसि गर्न आको नि? उ सरल रुपमा भन्न थलि मेरो १० को हिसाब सिक्नु छ तेसैले आको नि। उ पनि बिहान बिहान नजिकै को स्कुल मा पढ्ने गर्थि। मैले सरा सर उस्को हिसाब् सल्भ गरिदिये अनि उ गै। उ देख्न मा धेरै सुन्दर अनि सफ चट थिई
मैले कहिले पनि त्यस्तो कामुक दृस्टि ले हेरेको थिईन किनकि १ घर मा सधै बसि रहने मान्छे हरु सबै आफ्नौ नाता जस्तो लाग्छ। जस्तो दाजु बैनि को सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै सोच्दै थिये मैले त्यो दिन् सम्म सुस्मिता लाई। त्यो पनि उमेर मा मेरो भन्दा ५-६ बर्स कम अनि स्कुल पढ्ने केटि लाई त्य्स्तो दृस्टि लगाउने कुरै भयेन। म सङग सुस्मिता त्यति धेरै बोल्न पनि बोल्दिन थिई खलि केहि काम परे मात्र म उस्लाई बोलाउथे।
हाम्रो घर मा खसै येस्तो प्रसङग मा चर्चा हुदैन थिय जो केटा केटि को सम्बन्ध सङग जोडियेको होस। दिन बित्यो त्यस्तै २-४ होला। उ मेरो पछि परेको जस्तो लाग्न थाल्यो। होइन के भयछ यो सुस्मिता लाई? म मन मनै सोच्न थाले। मेरो काम प्राय राति ब्लु फिल्म हेर्ने र छोल्ने थियो तर मैले बेड मा सुतेर नै छोल्ने काम् चाहि बन्द गरिदिये। किनकि सुस्मिता लाई सबै थाहा छ जस्तो लाग्न थालेको थियो। प्राय मेरो ल्याप्टप खुलै हुने र पासवोर्ड पनि नराखेको हुनाले कतै ल्यापटप मा ब्लु फिल्म त हेर्ने गरेकि छैन सुस्मिताले मन मा मेरो प्रश्न जन्य्यो।
दिन हरु बितदै गयो १ दिन फेरि मेरो कोठा मा सफा गर्दै रहिछे सुस्मिता। मैले भने आज त केहि बोलिनस नि? उ हास्दै भनि अब त रयाल नेप्किन्न मा थापेर फाल्नु हुन्छ कि जस्तो छ नि? बेड मा त केहि टाटा छैन न्नि? मेरो त सरिर नै तातो भयो किनकि मैले हात्मा नै छोलेर नेपकिन ले पुछेर फाल्ने गर्थे। तै पनि मैले सम्हालिदै भने होइन यो कस्तो रयाल हो नेपकिन ले नै पुछ्नु पर्ने? मलाई त केहि थाहा छैन त? उस्ले कुरा घुमाउदै भनि त्यो त रयाले हरु लाई नै थाहा होला नि भन्दै बाहिर गै र फेरि बुक देखाउदै भन्न थलि हिसाब गरिदिनु पर्यो।
मैले पनि अब कुरा घुमायर गर्न थले। मैले सोधे हिसब हातलेनै गर्न मजा हुन्छ कि क्याल्कुलेटर ले ल भन्? उ पनि खप्पिस नै भकि रहिछे। र भन्न थालि हिसाब त कयाल्कुलेटर ले नै गर्न मजा हुन्छ होला नि तर आफुले त हातैले गर्न पर्छ के गर्नु? मैले कुरा को पुरा निर्क्योउल गर्न खोजे र भने त्यसो भये मेरो क्याल्कुलेटर छ नि त ले न त। उस्ले भनि अनि क्याल्कुलेटर भको मान्छे ले किन हातै ले हिसाब गरेको त राति राति? म त छक्क परे पहिला त आक्क न बक्क भये थे तर सुस्मिता ले राति राति भन्दा चाहि मैले कुरा को निस्कर्स निकले यस्ले मेरो रुमा मा झ्याल बाट हेर्ने गर्छे रति राति। मैले झट्ट कुरा पक्डे र भने धत अर्का को कोठा मा पनि हेर्नु हुन्छ त्यसरि?
उ केहि बोलिन खालि रातो रातो गाला बनायेर निहुरियर बसि। मैले पनि धेरै कुरा घुमाउन छाडेर मैले भने कति दिन देखि तैले मेरो काम हेर्ने गरेको भनेर सोधे। मैले धेरै नै कर गरे पछि उस्लए भनि म नभयेको बेला मा ल्याप्टप मा ब्लु फिल्म पनि हेर्ने र राति मैले ब्लु फिल्म हेर्दै गरेर छोलेको पनि झ्याल बाट हेर्ने गरेको कुरा बताई। मलाई भने अब रिस उठ्नुको सट्टा अब कति खेर सुस्मिता सङग चिकामारि खेलु जस्तो भयेको थियो। किनकि कसैलाई जबरजस्ति चिक्नु पाप हो भने कसैको प्यास नमेटाउनु पनि पाप् नै हो।
मैले उस्को किताब् अलि पर राखेर उस्लाई मेरो काख मा राखेर हल्का किस गरे उ पहिला त लजाको जस्तो गरि तर पछि त मेरो अङालो मा कसिदै जोर जोर् ले किस गर्न थालि मैले पनि मजाले किस गर्न थाले. मेरा हात उनको स्तनको वरिपरी सुम्सुमाउथे मलाई निकै मजा आईरहेको थियो उनको स्तन पनि निकै कसिलो हुदै गएको थियो स्तन सुम्सुमाउदै मेरा हात उनको पेट हुदै उनको साप्रा सम्म पुग्यो अनि एक हातले मैले उनको हिप पनि सुम्सुमाउदै थिए यत्तीकैमा मेरो लाडो निकै पोटीलो भएको थियो मेरो पाईन्ट नै छेड्ला जस्तो गरी मैले उनलाई आफ्नो कुर्ता खोल्न आग्रह गरे उनले लाज नै नमानी एकै पटकमा खोली दिईन उनले कालो ब्रा लगाएकी थिईन
कालो ब्रा मा उनका पोटीला स्तन निकै राम्रा देखिन्थे मन मनले मलाई उनको दुध खान मन लागेको थियो तर मैले हतार गरेको थिएन . केही बेरमा मैले उनको ब्रा पनि उनको शरिर बाट अलग गरिदिए मेरो अगाडी अर्धा नग्न केटि देखेर म निकै कामुक भएको थिए बिना कपडामा मैले उनको नाड्गो स्तन माड्दै थिए अनि केही बेरमा नै मैले उनको स्तन बच्चाले जस्तै चुस्न थाले उनलाई निकै काउकुती लागेको थियो बिच बिचमा आ……..
आ व व जस्ता शब्द निकाल्दै थिईन निकै बेरको चुसाई पछी मेरा हात मैले उनको दुई खुट्टाको बिचमा लगे तर त्याह सुरवाल पनि थियो मैले एकै झट्कामा उनको शरिरबाट उनको सुरवाल अलग गरीदिए उनको स्वाभाव देखेर कोही पनि उनलाई नजिकबाट हेर्दा उनि यति सेक्सी छिन् भनेर पत्याउने थिएन होला.उनको पयास देखेर मलाई नै आस्चर्य लाग्यो। सायद मैले नै यो काम गर्न नथालेको भये सुस्मिता २-४ दिन मा पागल हुन्द्थिन् होलि। किनकि जसरि मैले उन्को दुध मा चुस्दै पुति खेलाउन थाले उनि यक्दम बरबराउन थाले जस्तो आ आ अ।।। गरि रहेकि थिई। साथै मेरो लाडो पनि मुसार्दै थिई. उनले बिस्तारै मेरो लाडोलाई आफ्नो नरम हातले सलबलाउन थालिन अनि मैले पनि उनको शरिर सुम्सुमाउदै थिए अनि उनले मलाई बेडमा उत्तानो पारेर लडाइन
अनि आफ्नो कपाल मुखबाट हटाउदै आफ्नो ओठले मेरो लाडोलाई किस गरिन् म सहनै नसक्ने भएको थिए उनले आफ्नो मुखमा मेरो लाडोलाई लगेर चुस्न थालिन मलाई निकै मजा आईरहेको थियो अनि म दंग पनि थिए उनले लगातार चुस्दै थिईन उनी पनि त्यस्तै नै कामुक देखीन्थिन आ आ आ आ आ आ व व व व व व व यस्ता शब्दहरु उनको मुखबाट निस्की रहेका थए मैले उनको यौनीमा मेरो जिब्रोले टच गर्दै उनी झनै उत्तेजित हुन्थिन मैले पनि निकै बेर उनको यौनी मा मेरो जिब्रो लगाई राखे आफ्नो फनफनाईरहेको लाडोलाई एक स्वाटमै उनको भित्र पसाउने सुरले भित्र हाले तर एकै पटकमा पसेन मैले दोस्रो धक्का दिए अनि पुरै भित्र पस्यो तब उनको शरिरमा अनौठो कम्पन भयो उनले बेग्लै फिलीङ्स गरिन अनि भन्दै थिईन जिवन भर नै यसरी नै मजा देउ
म पनि ल्वाम ल्वम भित्र बाहिर बनाउदै थिए उनि चरमा आनन्दाम थिईन आखाँ बन्द गरेर या या या या या व व व व व आआआआआआ गर्दै थिईन मैले पनि आफ्ने सुरमा दिदै थिए करिब 15 मिनेटको मच्चाई पछी मेरो झर्ने बेला भयो उनि पनि उनि पनि सिथिल भएकी थिईन अनि मैले मेरो माल उनको भित्र झारिदिए उनी पनि शिथिल भएर नरमल कुरा गर्न थालि।अनि हामी एक अर्को को अंगालोमा बाधिएर करिब 10 मिनेट थकाई मार्यो. तर मैले सोधे पैला पनि तिमिले यस्तो गरेको थियै? उसले भनि पैला खलि औल अनि घुसारेर हस्त मैथुन् गरेको तर आज सम्म कसै सङग सेक्स नगरेको कुरा बताई। मैले पनि उनि सङ नै पहिलो पटक चिकेको कुरा सुनाये।
त्यो दिन हामिले दिन र रात मिलयेर करिब छ पटक चिकेउ होला। हामि आज्कल पनि प्राय २-३ पटक् चिक्छौ। प्राय राति उनि मेरो नै रुम म सुत्छिन। मलाई पनि पुतिमा लाडो घुसायर दुध समातेर सुत्न धेरै मन पर्छ। उन्को पनि धेरै योन् चाहाना भयेको ले पुतिमा हमेसा लाडो राखि राख्न चाहन्छिन। मेरो माल झरे पनि म लाडो पुति भित्र नै घुसारेर सुत्छु निदाये पछि कुन बेला निक्लिन्छ थाहा नै हुदैन। चिक्न को लागि कतै केहि सोच्नु नपर्ने हुनाले आज्कल हाम्रो पढाई पनि राम्रो भै रखेको छ।
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (350)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (265)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (198)
मेरो मस्त जवानी हेर्न नसक्नेले टीभी बन्द गर्नुहोस् म… (129)
अब जंगलमा पाइने जुकाको मूल्य आकासिने यस्तो छ संकेत,… (123)
८ घण्टाभन्दा धेरै सुत्नुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ (62)